Brokoli | February 2020
Waxaan dhirta geedka tufaaxa "Medunitsa": wax walba oo ku saabsan sifooyinka noocyada kala duwan, beerashada iyo daryeelka
Ugu Weyn Ee Brokoli
Noocyada broccoli ee ugu caansan
Broccoli waa nooc ka mid ah kaabajka. Tani waa khudradda aad u faa'iido badan. Waxaa ku jira folic acid, birta, fiber, fitamiin C iyo walxo kale oo badan oo loo baahan yahay jidhka bini'aadamka. Iyo si ay u koraan sida kaydka ah ee fitamiinada waxay noqon kartaa goobtaada. Maqaalkani wuxuu qeexayaa kuwa ugu caansan iyo ugu haboon ee beerto noocyo of broccoli.
Isticmaalka iyo isticmaalka barokooli, faa'iidooyinka iyo waxyeellada
Broccoli waa mid caan ah sababtoo ah inta badan ee maaddooyinka waxtarka leh ee ay ka kooban tahay. Inta badan waxa loo adeegsadaa cuntada, laakiin waxa ay ka heshay codsigeeda cosmetology. Inkasta oo faa'iidooyinka waaweyn ee jirku uu jiro, waxaa jira waxoogaa iska horimaad ah. Calorie iyo kiimikada kiimikada ee broccoli Kuwani waa kaabash waxaa loo tixgeliyaa kaloori hoose, sidaa darteed wax soo saarka cuntada.
Kariska iyo goosashada brokoli
Maanta waxaa jira siyaabo badan oo loo gooyo broccoli xilliga jiilaalka. Qaar ka mid ah waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo inta badan faa'iidooyinka kaabajka ah ee kaabajka, kuwa kale - si ay u diyaariyaan isticmaalka dheeraadka ah ee ka kooban halabuurka kale, iyo weli kuwa kale waa saxan gooni ah. Kala duwanaanshaha noocan ahi wuxuu u oggolaanayaa hudheel kasta in uu doorto hab ku haboon baahidiisa, fursadaha iyo niyadda.
Broccoli qaboojiyaha xilliga jiilaalka: sawir talaabo tallaabo tallaabo ah oo sawir leh
Broccoli waxaa loo tixgeliyaa qaraabada qanjirada ugu dhow - khudradda oo ah mid aad u qiimo badan oo bini'aadamka ah. Waxaa ku jira qadar badan oo borotiin ah, fitamiino badan, amino acids iyo minerals, iyo sidoo kale qadar badan oo fiber ah. Khubarada ayaa kugula talinaya in ay ku jiraan badeecadan oo ku jirta cuntada ay dadka ku haystaan ​​nidaamka wadnaha iyo xididdada.
"Delicacy" miiska: sifooyinka iyo sharaxaadda noocyo kala duwan oo yaanyo ah
Sidee loo soo saari karaa begonias ee haraaga guriga iyo qaadashada daryeelka saxda ah ee geedka?
Sida loo doorto baraf baraf ah si loo siiyo, talooyin iyo khiyaamo
Noocyada iyo siraha isticmaalka kartida leh ee oregano inta lagu jiro uurka
Haddii aad rabto inaad beertaada beertaada si fiican u soo jiidato oo soo jiidasho leh, laakiin aadan haysan waqti badan, dhirta iyo qurxinta ayaa kuu iman doona gargaarkaaga. Doorashada waxa la abuuro ee deyrta, fiiro gaar ah ugu sareeya ee dhirta ay gaari karto, sababtoo ah tani waa qodob muhiim ah oo lagu go'aamiyo aagagga beeritaanka. Read More
Rosanna geranium Blooming xagaaga oo dhan: dib u eegis ah noocyo leh sawiro, sifooyinka beerashada iyo dhalmo
Molly's Potatoes Jarmal - Dhadhanka Dhuxul iyo Dareemo Sare
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Brokoli 2020